Nhau uye ruzivo kuti Rekonq 0.9 ichatisvitsa | Kubva kuLinux
Nhau uye ruzivo kuti Rekonq 0.9 ichatisvitsa
ajam nezuro akatiendesa mberi chimwe chinhu nezve vhezheni yacho 0.9 de rekonq.
Sezvaanotaura mune yake posvo, iye anotarisira kuti neshanduko idzi mushandisi anonakidzwa nekuwedzera kuyerera, nekukurumidza, uye kunakidza kufamba. Idzi ndidzo dzimwe shanduko / nhau dzichaunzwa neshanduro iyi nyowani:
Mushandisi musangano manejimendi. Pakupedzisira rekonq ichatanga zvakanaka kana chikamu KDE kudzorerwa 😀
Mumwedzi kana kuti isu tinokwanisa kunakidzwa neshanduro ino yakagadzikana.
Zvishoma nezvishoma Rekonq iri kufambira mberi, uye kunyangwe ivo vasati vafunga kutsigira addons / complements, ini ndinofunga ndiyo imwe nzira yakanaka 🙂
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Nhau uye ruzivo kuti Rekonq 0.9 ichatisvitsa
Ndiri kufara kuti kuvandudzwa kwaRekonq kwave kusimba zvakanyanya, chinosekesa ndechekuti qupzilla yaifanirwa kuratidzika kuisa kumanikidza pairi. Ndokusaka ini ndichichengeta iyo yekupedzisira seyechipiri browser mushure meOpera, iri bhurawuza rinovimbisa zvakawanda, uye kufambira mberi zvishoma nezvishoma nekuburitswa kwega kwega.
Ndinovimba ramba uchifambira mberi seizvi.
Chii chinoitika kwandiri neRekonq muKDE ndechekuti inovhara nguva dzese uye inoratidza mhosho meseji yekumhan'ara.Izvi zvakanditungamira kuti ndishandise Opera, iyo mumaonero angu inomhanya kwazvo muKDE, zvirinani kupfuura Chromium. (Firefox inyonganiso nevatyairi veNvidia madhiraivhu munzvimbo iyoyo).
Pane yangu Debian ine Openbox iyo inoita yakanakisa (kwandiri) ndeye Chromium
GMultiMMS. MMS download maneja
Android inogamuchirwa kuti ishandiswe paPentagon